होसियार! यि रोगीहरूले भुलेर पनि नखानुहोस अदुवा - Nawalpur Dainik
अदुवा हाम्रो भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने परिकारलाई स्वादिलो बनाउन प्रयोग गरिने चिज हाे । अदुवाले हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा गर्छ । अदुवाले विभिन्न रोगहरुबाट बचाउन सहयोग गर्छ तर कुनै बेला यो फाइदाजनक पनि हुँदैन ।
यसलाई परम्परागत र वैकल्पिक औषधीको रुपमा प्रयोग गरिने भएता पनि यस्ता समस्या भएकाले भने यसको सेवन गर्नुहुँदैन । अदुवा मधुमेहका बिरामीले सेवन गर्नुहुँदैन। अदुवा धेरै सेवन गर्दा रगतमा सुगरको मात्रा बढ्ने गर्छ । त्यस्तै महिलाहरुलाई महिनावारीको समस्या छ भने पनि अदुवाको सेवन गर्नुहुँदैन ।
क्तचापका बिरामीले पनि अदुवाको सेवन र्गाु फाइदाजनक मानिदैन । तपाईलाई पेटको कुनै समस्या छ भने पनि भुलेर पनि अदुवा सेवन नगर्नुहोस् यसले शरीरमा एसिडको मात्रा बढाउछ । यदी मोटो हुने रहर छ भने पनि यसको सेवन नर्गनु नै राम्रो हुन्छ ।
तपाईले कुनैको औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ भने पनि अदुवा सेवन नगर्नुहोस् किनकी यसले झन समस्या ल्याउछ। त्यस्तै रगतसम्बन्धी कुनै समस्या भए पनि यसको सेवन गर्नुहुँदैन ।
याे पनि पढ्नुहा्स्।
ब्रोकाउली खानुका यस्ता छन् १० फाइदा, मुटु रोगदेखि क्यान्सर हुने खतरा कम
हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक तरकारी हो ब्रोकाउली । ब्रोकाउलीको तरकारी धेरैले रुचाउने पनि गर्छन् । ब्रोकाउली तरकारीको रुपमा मात्र नभई औषधिको रुपमा पनि उपयोग गर्ने गरिन्छ।
प्रोटीन, क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेट, आइरन, भिटामिन ए, सी र अन्य पोषक तत्वहरु पाइने ब्रोकाउलीको तरकारी नियमित खाएमा मुटुसँग सम्बन्धित रोग न्युनिकरण हुन्छ ।त्यस्तै क्यान्सरबाट हुने खतरा पनि कम हुन्छ । ब्रोकाउलीको तरकारी नभए सलाद र सूप पनि बनाएर खान सकिन्छ ।हेर्नुहोस् यस्ता छन् – ब्रोकाउलीका १० फाइदा
१. क्यान्सर रोकथामका लागि प्रभावकारी – ब्रोकाउलीमा शक्तिशाली एन्टिअक्सीडन्ट र एन्टी कार्सिनोजेन तत्व पाइने भएकाले स्तन, ग्रीवा र प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिम कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँदछ।२. प्रोटिनको राम्रो श्रोत – आधा क्यालोरीको साथ एक कप ब्रोकाउलीमा एक कप मकै वा चामल बराबरको प्रोटिन पाइन्छ
३. प्रतिरक्षा स्वास्थ्य बढावा – एक कप ब्रोकलीमा बिटा क्यारोटीन, जिंक र सेलेनियमको ठूलो मात्रा पाइन्छ, जसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबूत बनाउन सहयोग गर्दछ।४. मधुमेहसँग लड्न मद्दत गर्ने – उच्च फाइबर र कम सुगर भएका कारण, इन्सुलीनलाई न्यूनतम मद्दत गर्दछ।
५. मुटु रोगीका लागि लाभदायक – ब्रोकाउलीमा पाइने क्यारोटीनोइड ल्युटिन, बी सिक्स, फोलेट र कम सुगरको मात्राले इन्सुलिनलाई नियन्त्रणमा राखी मुटु रोगको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ।६. हड्डीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्ने – ब्रोकाउलीमा थुप्रै दुग्ध उत्पादनहरू भन्दा बढी क्याल्सियम र भिटामिन के पाइने भएका कारण यसले हड्डी स्वास्थ्य राख्न मद्दत गर्दछ।
७. रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्ने – यसमा पाइने पोटासियम, म्याग्नेशियम र क्याल्सियमको मात्राले रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्दछ।८. रुगा खोकीबाट बचाउने – ब्रोकाउलीमा पाइने भिटामिन सी जसमा एन्टीअक्सीडेन्ट र एन्टी इन्फ्लामेटरी गुण पाइने गर्छ। जसले रुगा खोकीबाट बचाउने गर्दछ।
९. यौन उर्जालाई बढाउने – शरीरको उच्चतम तौललाई घटाउनुका साथै यौन उर्जालाई पनि बढाउन मद्दत गर्दछ।१०. भ्रुणका लागि फाइदाजनक – एक कपको ब्रोकाउलीमा ९४ एमसीजी फोलिक एसिड हुन्छ, जुन बी भिटामिनको श्रोत हो र जसले भ्रुणको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
Posted in पत्रपत्रिकाबाट, स्वाथ्य, हेडलाइन
Prevजेठ ०६ गते बिहिबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
Nextस्वाद र औषधिले भरिपूर्ण अमलाको जुसमा पाईने फाईदाहरु जान्नुभयो भने तपाईंहरु खोजी खोजी खानुहुनेछ (भिडियाे हेर्नुस्)